१२ वर्षपछि श्रीमानकै अगाडि बलात्कार गर्ने पक्राउ – Saurahaonline.com
१२ वर्षपछि श्रीमानकै अगाडि बलात्कार गर्ने पक्राउ
सौराहा अनलाइन | २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार
काठमाडौं : पतिकै अगाडि पत्नीलाई बलात्कार गरेर फरार एक अभियुक्त बुधबार पक्राउ परेका छन् । घटनामा संलग्न हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका– ११ इनरुवाका ५० वर्षीय हरिनारायण यादव १२ वषएपछि पक्राउ परेको डीएसपी तिलक भारतीले बताए ।
उनका अनुसार सोही ठाउँका दुधियावाला भनिने खटर यादवको खोजी भइरहेको छ । पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउने सम्भावना बढेको बताएका छन् । ‘बगेको खोला १२ वर्षमा फर्कन्छ भन्थे, हो रहेछ, १२ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ परे’, पीडित दम्पतीले भने ।
सुनसरीको इनरुवामा मजदुरी गरेर दसैं मनाउन २०६४ असोज २९ गते राति हनुमाननगर हुँदै घर फर्किरहेका बेला यादवद्वयले दम्पतीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।
दुवैजनाले पतिलाई नियन्त्रणमा लिएर पत्नीलाई बलात्कार गरेका थिए भने साथमा रहेको १० हजार रुपैयाँ लुटेका थिए । पीडितले २०६४ असोज ३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो ।
बलात्कार पुष्टि भएपछि दम्पतीले सप्तरी जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरे । सप्तरी जिल्ला अदालतले हरिनारायणलाई जबरजस्ती करणी र चोरी मुद्दामा ०६५ चैत ११ गते एक वर्ष ६ महिना कैद सुनायो ।
उनी आफू घटना भएका बेला भारत पञ्जाबमा मजदुरी गरिरहेकाले घटनामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै ०६७ असार १७ गते अदालतमा हाजिर भए ।
खटरको समेत बयानपछि अदालतले २०६७ फागुन १२ गते दुवैजनालाई सफाइ दियो । हरिनारायणलाई कम सजाय र खटरलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पीडितले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन दिए ।
अदालतले ०७१ मंसिर २९ गते हरिनारायणलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच हजार क्षतिपूर्ति भराउने तथा खटरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला सुनायो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध ०७३ चैत २५ गते दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै सफाइको माग गरे ।
गत जेठ १ गते सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडितका पक्षमा निर्णय सुनाएपछि अभियुक्त फरार भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा मनोहर पोखरेलले लेखेका छन् ।
तपाईको शनिबार यस्तो भाग्यफल ? २०७७, १० आश्विन शनिबार
टिकौली जंगलमा ट्रकको ठक्करबाट पुरेन्द्रको मृत्‍यु २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार
आईपीएल क्रिकेटमा दिल्लीको लगातार दोस्रो जित, चेन्नई ४४ रनले पराजित २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार
भरतपुर महानगरको शहरी क्षेत्र जलमग्न भएपछि पुरानो नहर खोतल्दै २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार
धोएर प्रयोग भइसकेको कण्डम बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार
लोक सेवा आयोगका परीक्षा कात्तिकदेखि सुचारु हुने २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार
तपाईको शनिबार यस्तो भाग्यफल ?
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) टिम परिचालन गरी व्यावसाय बिस्तार गर्न सकिनेछ भने व्यापारबाट मनग्गे फाईदा हुनेयोग.....
टिकौली जंगलमा ट्रकको ठक्करबाट पुरेन्द्रको मृत्‍यु
आईपीएल क्रिकेटमा दिल्लीको लगातार दोस्रो जित, चेन्नई ४४ रनले पराजित
भरतपुर महानगरको शहरी क्षेत्र जलमग्न भएपछि पुरानो नहर खोतल्दै
‘रेल्वे सेवाको नाम ‘नेपाल रेल्वे’ राख्नुपर्छ’
‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा किन रोक ?
कोरोनाले समाजमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन
बालविवाहको चुनौती बन्दै
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षमा बुढाथोकी
छैटौँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस शनिबार मनाइँदै